အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ပင်လယ်ထဲက ဘုရားကျောင်းဆောင်
14 Responses to “ပင်လယ်ထဲက ဘုရားကျောင်းဆောင်”
ဘုရားကျောင်း တည်ရှိရာ နေရာလေးက အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ စိတ်ကြည်နူးဖို့ ကောင်းတယ်နော်..၊ ဘုရားဝတ်ပြုပြီး ကော်ဖီ တစ်ခွက်နဲ့ ပန်းချီ ထိုင်ဆွဲနေဖို့ ကောင်းတဲ့ နေရာပဲ၊း)
မျှဝေတာ ကျေးဇူးပါ မချောရေ...။း)
ဘာလီကျွန်းကို သွားချင်တယ်... မချောေ၇... ပို့ပေးမလား.. :D :P
ဓါတ်ပုံတွေအရမ်းလှတာပဲ၊ Postcard ပုံတွေအတိုင်းပဲ။ ဒီတစ်ခေါက် ရန်ကုန်ရေလယ်ဘုရားသွားမှ ရိုက်ကြည့်အုံးမယ်။
ဘာလီကျွန်းကို အရမ်းသွားချင်တာပဲ ..
သွားတဲ့သူတိုင်းကလည်း ဘာလီကျွန်းလှကြောင်းပြောကြတယ် ..
နောက် boracay island လည်း သွားချင်တယ် . ...
ငယ်ငယ်ထဲကနားထောင်ဖူးတဲ့ အဆိုတော်ဖြူသီ သီချင်းလေးကို သတိရမိတယ်.။
အဲဒီထဲက သွားချင်ခဲ့တာ.ခုတော့ ဓါတ်ပုံလေးကြည့်ပြီး ရောက်ခဲ့သလိုပါပဲ.
မရေ...နဂိုကမှ ဘာလီကျွန်းကို သိပ်ပြီးသွားချင်နေရတဲ့
အထဲ မက ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့လာဆွတော့ ....:)))
မိုးနတ်ကတော့ juice လေးတစ်ခွက်နဲ့ စိတ်လိုလက်ရ
ကဗျာထိုင်ရေးဖို့ကောင်းတဲ့ နေရာလို့ မြင်မိတယ် :P
ဘာလီကျွှန်းက လှတယ်လို့သွားတိုင်းသူတိုင်းက ပြောကြတယ်..ရှုခင်းဓာတ်ပုံလေးတွေက တကယ်လှ..
အတော်လေးကို သာယာမဲ့နေရာဘဲ။ ရှေးတုန်းကလူတွေက ပိုပြီး အနုပညာမျက်စိရှိပုံပေါ်တယ်။ အဆောက်အဦတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် တကယ့်နေရာတွေမှာချည်းဘဲ။
ခရီးသွားချင်တဲ့စိတ်ကို ချိုးနှိမ်ထားဆဲမှာ ချောရဲ့ အင်ဒိုနီးရှား ဘာလီကျွန်း အကြောင်း ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ပုံတွေကိုမြင်ရလေတော့ ပင်လယ်ထဲက ဘုရားကျောင်းဆောင်လေးကို ဖူးခွင့်ရချင်တဲ့စိတ် ထိန်းမရတော့ဘူးကွယ်။
သွားချင်လိုက်တာ လို့ တွေးမိတုန်းရှိသေးတယ်..
မြွေဆိုတဲ့ အသံလည်း ကြားရော ......
စိတ်ထဲက ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း ဖြစ်သွားတယ်...။